Wararka Maanta: Isniin, Aug 2 , 2021-Barlamaanka Koonfur Galbeed oo doortay haweenaydii labaad ee koonfur galbeed u matalaysa aqalka sare
Senator Ayaan Adan Cabdullahi ayaa ku guulaysatay doorashada kursiga ay u loolamaysay kaddib markii ay barlamaanka Koonfur Galbeed ay ka heshey 79 cod.
Waxay ka guulaysatay Farxiyo Nuur Aadan oo codadkii la dhiibtay ka heshay 8 cod. Shan kamid ah codadka ayaa halaabay, iyadoo tirada guud ee codbixiyaasha ay ahaayeen 92 mudane.
Koonfur Galbeed waxay markii labaad barlamaanka aqalka sare u dirsanaysaa labo sanator, waana maamulkii ugu horeeyay ee tallaabo nuucaas ah qaada.
Aqalkii hore, waxaa Koonfur Galbeed u matalayay Samsam Ibraahim Cali oo maanta mar kale kursigeeda difaacatay iyo Timiro Maxamed Cali.